စျေးပေါသောအလိုအလျောက်မြေသြဇာထုပ်ပိုးစက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
၎င်း၏ "အစာရှောင်ခြင်း, တိကျမှန်ကန်သော, တည်ငြိမ်" နှင့်အတူ အော်တိုထုပ်ပိုးစက် စီးပွားဖြစ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာများထုတ်လုပ်မှုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်စဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျယ်ပြန့်သောပမာဏအတိုင်းအတာနှင့်တိကျသောတိကျမှုရှိသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာအတွက်ထုပ်ပိုးစက်ကိုပစ္စည်းအရေအတွက်ထုပ်ပိုးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဓာတ်မြေသြဇာတောင့်ကိုထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်နှစ်မျိုးနှင့်ပုံးတစ်မျိုးတည်းပါ ၀ င်သည်။ စက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှု၊ လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားမှုနှင့် ၀.၂% အောက်တွင်ရှိသောတိကျသောအရေအတွက်တိကျမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
၎င်းသည်“ မြန်ဆန်။ တိကျမှန်ကန်ပြီးတည်ငြိမ်သော” ဖြင့်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပထမဆုံးထုပ်ပိုးခြင်းဖြစ်လာသည်။
၁။ သက်ဆိုင်သောထုပ်ပိုးခြင်း - အိတ်များ၊ စက္ကူအိတ်များ၊ အိတ်များနှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များစသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။
2. ပစ္စည်း: သံမဏိ 304 ကိုထိတွေ့မှုမြင့်မားသောပစ္စည်း၏ထိတွေ့မှုအပိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်။
Automatic ထုပ်ပိုးစက် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောအသိဥာဏ်ရှိသောထုပ်ပိုးစက်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အလိုအလျောက်ချိန်သောကိရိယာ၊ သယ်ဆောင်ရန်၊ အပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းစက်၊ ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းလေးခုပါဝင်သည်။ အသုံး ၀ င်မှုပုံစံသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက် ကွန်ပျူတာအရေအတွက်ထုပ်ပိုးမှုစကေးဟုလည်းလူသိများသည်၊ အဓိကစက်သည်အမြန်နှုန်း၊ အလတ်စားနှင့်နှေးကွေးသောသုံးမြန်နှုန်းကျွေးမွေးမှုနှင့်အထူးအစာကျွေးခြင်းရောစပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာ၊ နမူနာထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတားဆီးခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်အမှားလျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
၁။ အစားအစာအမျိုးအစားများ - အစေ့၊ ပြောင်း၊ ဂျုံ၊ ပဲ၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ နှမ်းစသည်
၂။ ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးအစားများ - အစာမှုန်များ၊ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ အမိုးနီးယမ်ဖော့စဖိတ်၊ ယူရီးယားအမှုန်များ၊
၃။ ဓာတုအမျိုးအစားများ - PVC, PE, PP, ABS, polyethylene, polypropylene နှင့်အခြား granular ပစ္စည်းများအတွက်။
4. အစားအစာအမျိုးအစားများ - အဖြူ၊ သကြား၊ ဆား၊ ဂျုံနှင့်အခြားအစားအစာအမျိုးအစားများ။
(2) အရေအတွက်တိကျစွာ 0.2% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။
(3) ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
(၅) သွင်းကုန်အာရုံခံကိရိယာများကိုလက်ခံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ပြီးအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် pneumatic actuators ကိုသွင်းပါ။
Loading & Feeding ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၄။ Hopper အရွယ်အစားနှင့်မော်တာပုံစံကိုစွမ်းရည်အရစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
မော်ဒယ် YZBZJ-25F YZBZJ-50F
အလေးချိန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) ၅-၂၅ 25-50
တိကျမှန်ကန်မှု (%) ± 0.2-0.5 ± 0.2-0.5
မြန်နှုန်း (အိတ် / နာရီ) 500-800 300-600
ပါဝါ (v / kw) 380 / 0.37 380 / 0.37
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 200 200
ယေဘုယျအရွယ်အစား (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
ရှေ့သို့ Loading & Feeding Machine
နောက်တစ်ခု: နှစ်ဆ Hopper အရေအတွက်အရေအတွက်ထုပ်ပိုးစက်
နိဒါန်း Loading & Feeding Machine ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံအဖြစ် Loading & Feeding Machine ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းအမြောက်အများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည်အမှုန်အရွယ်အစား ၅ မီလီမီတာအောက်ရှိသောသေးငယ်သောပစ္စည်းများသာမကအမြောက်အများကိုပါသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
နိဒါန်း Vertical Disc Mixing Feeder စက်သည်ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။ Vertical Disc Mixing Feeder စက်ကိုလည်း disc feeder ဟုလည်းခေါ်သည်။ စွန့်ပစ်ဆိပ်ကမ်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်အရထွက်ရှိမည့်ပမာဏကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းတွင် Vertical Disc Mixin ...
နိဒါန်းရှိုနေသောအရည် Solid-အရည် Separator ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးကိရိယာဖြစ်ပြီးကြက်၊ ၎င်းသည်ကုန်ကြမ်းများနှင့် fecal မိလ္လာများကိုတိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှအရည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အစိုင်အခဲအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုသီးနှံစိုက်ပျိုးရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။